निखिल जे चाहदैनन् किन हुन्छ त्यही पटक पटक ? « Ramailo छ
निखिल जे चाहदैनन् किन हुन्छ त्यही पटक पटक ?
एक्सन स्टार निखिल उप्रेती पाँच करोड लगानी अनुमान गरिएको फिल्म ‘कमिटमेन्ट सिक्सटी आवर्स’ को सुटिङमा व्यस्त छन् । यस फिल्ममा निखिलले तीन वटा जिम्मेवारी आफैंले सम्हालि रहेका छन् । निर्माण, एक्टिङ र एक्सन कट् निखिल एकै जनाको काँधमा छ । बलिउड कलाकारले समेत अभिनय गरिरहको निखिलको फिल्मको यतिबेला राम्रै चर्चा छ ।
तर, निखिल भने आफ्नो काम चर्चाको लागि नभएको दाबी गर्छन् । ‘म चर्चाको लागि कहिल्यै काम गर्दिनं’ निखिल भन्छन् । उसो भए निखिल के को लागि काम गर्छन् त ? ‘मैंले गर्ने कामको चर्चा हुन्छ’, उनको बुझाई छ । हुन् पनि हो दशक पहिले ‘पिंजडा’ फिल्ममा सात तल्लाबाट हाम फाल्दा निखिलको चर्चा चुलियो । हिट हुँदा कुरै छाडौं । नायिका संचिता लुईंटेलसँग दोश्रो विवाह गर्दा पनि निखिलको कम चर्चा भएन । अहिले पनि फिल्म ‘भैरव’ पछि निखिलले निर्देशन गरेको छायाँकनरत फिल्मको चर्चा छ । चर्चा नचाहने निखिललाई चर्चाले भने कहिले छाड्ने भएन ।